Ukukhula kwabantu base-Urban kubonile igebe elikhulu elenziwe phakathi komkhiqizo weFresh Farm ofinyelela kumthengi ngesikhathi nangekhwalithi enhle.
Futhi ushintsho lwemikhuba yokudla yabantu basemadolobheni lube ukudla okucutshungulwayo neziphuzo, lubone ukwanda okukhulu eMbonini Yokucubungula Ukudla, ukugcina amazinga aphezulu okuthembeka neKhwalithi.
I-Energy ne-Water ingamandla amakhulu eMbonini Yezokudla Neziphuzo ngokuqhubekayo ibeka ingcindezi yokuthola nokusungula ubuchwepheshe obuthuthukisiwe obungeke bonge amandla kuphela namanzi kodwa futhi obuzobeka amanani entengo abe sezingeni elamukelekayo.
Kukhona umjaho womhlaba wonke phakathi kwezinkampani ezisembonini yezokudla neziphuzo futhi unesibopho sokuthola izixazululo esimeme emsebenzini wazo. Ngenxa yalokhu, imizamo eyenziwe ukuqinisekisa ikhwalithi, ukusebenza kahle, nokwethembeka kufanele ihlangane kahle.
I-SPL inikela ngemikhiqizo Egcina Amandla efana ne-Evaporative Condenser, iHybrid Cooler nemibhoshongo yokupholisa eyimodemu njengezinto ezisemqoka zomkhakha wezokudla neziphuzo - kusuka ezixazululweni ezisezingeni eliphakeme kakhulu kuze kube sekuqalisweni komuntu ngamunye. Nomaphi lapho kuhileleka khona ukufudumeza noma ukupholisa, uzothola isisombululo esihlanganisiwe esivela kithi - esizobheka hhayi kuphela izintshisekelo zakho, kepha nezamakhasimende akho. Singabalingani bakho abathembekile kulo lonke uchungechunge lwenqubo eyengezwe ngenani.